Arts & Humanities » Mumbo Jambo လာလေရော့ – KZ’s ကြည့်မိသမျှ	34
3) Now you see me (2013) Rating 7.3 ရှိပါတယ်။
မြစပဲရိုး says: တစ်ကား မှမသိ။ သရုပ်ဆောင် တွေထဲ လဲ စကားလက် တစ်ယောက် ဘဲ သိတယ်။
ခင်ဇော် says: အရီးးး
​ဒေါ် လေး says: ဘာရုပ်​ရှင်​မှ မကြည့်​ဖြစ်​တာ အ​တော်​ကြာပြီ
ခင်ဇော် says: ကျေးးကျေးး ဒေါ်လေးးရေ.
Alinsett @ Maung Thura says: .ကြည့်တော့ ကြည့်ချင်သား…
ခင်ဇော် says: ရှာမနေနဲ့ ဆက်ဆက်…
Alinsett @ Maung Thura says: ဂယ်လားးး
ဒီရောက်မှ ကျနော်ပြန်ကူးယူမယ်လေ ဗာဂိုးချင်းတူတူတွေ ဆိုတော့ ဇာတ်ကားကြိုက်မိတာတွေလည်း တူမှာပဲ
kai says: ဇီဇီကတော့.. အဲလို တူရာတွေစု.. ဂရုပင်းလုပ်တာ…တော်တော်တော်တယ်..။
ခင်ဇော် says: နောင်တစ်ချိန်မှာ အမေ ဆွိ ဆိုပြီးး နာမည်ကြီးးတော့မှာ..
lu lu says: အညွှန်းနဲ့ တင် ကျိချင်လှပါပီ
ခင်ဇော် says: တူတူ ပဲ.. ခပ်အေးးအေးး ကားး ဆို ညွှန်းးသူ ၂ ယောက် အထက်ရှိမှ ကြည့်တယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: နံပါတ် ၁ က အညွှန်းဖတ်၊ ပိုစတာကြည့်တော့ မင်းသားရဲ့မျက်လုံးနဲ့ မျက်လှည့်ပညာ အင်မတန်လိုက်ဖက်မယ့်ပုံရှိလို့ ကောင်းမှာပဲလို့ ထင်တယ်။
ငယ်ငယ်ကဖတ်ဖူးတဲ့ သူခိုးကြီးငတက်ပြား လိုမျိုးဆိုပြီးတော့ပေ့ါ…….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ပထမ ကားနဲ့ ဒုတိယကားက မင်းသားတွေ အကုန်လုံးက အမူအရာ အရရော ကောင်းကြလို့ ဒီ ကားတွေ နာမည်ကြီးတာ ချစ်မ။
ဦးကြောင်ကြီး says: ဘရင်းန် ကြက်ပေါင်းရည် အဲဒမှာ ဘယ်ဇေးယှိလဲ လူမှိုက်ခင်ဈော်
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ပထမကား မသိဘူးဗျ
Mr. MarGa says: သုံးကားလုံးကြည့်ဖူးတယ်
မျက်​လှည့်သက်​သက်ထက် အားပြိုင်​မှုတွေ ပြကွက်​တစ်​ခုအတွက် ကြိုပြီး ပြင်​တာတွေပါ ပါလို့ အဲ့ဒါတွေက ပိုစိတ်​ဝင်စားအောင် လုပ်​သွားသလားပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: illusionist က မျက်စေ့မလည်ပါဘူးးး
Mr. MarGa says: Prestige ကို မလည်​ဘူး
ကျနော် အက်​ရှင်​ကားတွေနဲ့ပဲ အစပ်​အဟပ်​တည့်တယ် ထင်​ပါရဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: Prestige ကိုသေချာမသိဘူး။
ခင်ဇော် says: လှည့်ကွက်တွေ ကြိုက်ရင် prestige ကိုလည်းး ကြည့်ကြည့်
Mike says: .ပထမကားနဲ့ တတိယကားကြည့်ဖူးတယ်…ကြိုက်ပါတယ်
.ဒုတိယကားရှာကြည့်အုံးမယ်..သင့်ခရုပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဦးကျောက်ခဲ says: Edward Norton ကို American History X (1998) မှာ အကြိုက်ဆုံးပဲ…
ခင်ဇော် says: မော်ဂန်ဖရီးမန်း က ဘယ် ကားဖြစ်ဖြစ် အမူအရာ က သင့်တော်နေသလိုပဲနော်။
ကြောင်ဝတုတ် says: အပေါ် (၂)ကားတော့ မကြည့်ရသေးဗျာ…
ခင်ဇော် says: အပေါ် ၂ ကားး
လုံမလေးမွန်မွန် says: ရှေ့နှစ်ကားကို မသိဘူး..
ဟိုနေ့က Avengers ကားသွားကြည့်တော့မှ အဲ့ထဲမှ ပြန်တွေ့တယ်… ဟိုတစ်ယောက်နဲ့ ငြင်းရသေး.. Now you see me ထဲက မင်းသားပါဆိုတာကို မဟုတ်ဘူးပြောနေလို့.. :D
ခင်ဇော် says: ဟုတ်တယ် အမွန်လေးးး
Avenger ထဲက Hulk က Now u see me ထဲက ရဲအရာရှိ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3924
weiwei says: နံပါတ် (၁) နဲ့ နံပါတ် (၃) ကြည့်ဖူးတယ် ..
ခင်ဇော် says: နံပါတ် ၂ လည်းး ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်လိုက်..!!
Wow says: Now u see me က ကြိုက်လွမ်းလို့ (၂)ခေါက်တောင်ပြန်ကျိရတယ်…
အပေါ်ဆုံးကားကတော့ နဲနဲအေးတယ်.. အလယ်ကား မကျိဖူးဘူး.. ရှာရရင်ကျိအူးမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: Now You See Me က
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လော်ဘီတွေရဲ့ အန္တရာယ်ရှိသောလှည့်ကွက်များ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပမယ့် အချိန်
ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ လူတွေဟာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အမျိုးမျိုးသောလှည့်ကွက်တွေကို (လှည့်ကွက်မှန်း သိ၍ (ဝါ) မသိဘဲ) အသုံးပြုနေကြပါတယ် ။ အဲဒီလှည့်ကွက်တွေအကြောင်း ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါသေးတယ် ။ လှည့်ကွက်တွေအကြောင်းမပြောခင် မျက်လှည့်အကြောင်းအရင်ပြောပါဦးမယ် ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က ကျွန်တော် မျက်လှည့်ဆရာကြီး စက္ကောမ ဆီမှာ မျက်လှည့်ပညာ လက်လှည့်ပညာတွေသင်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ အားလပ်ချိန်တော်တော်များများလည်းဆရာကြီးဆီသွားပြီး ဆရာကြီးပြောပြတဲ့ လူ့သဘောသဘာဝ နဲ့ လှည့်ကွက်သဘောတရားတွေအကြောင်းအများကြီးလေ့လာဆည်းပူးမိခဲ့ပါတယ် ၊ ရှင်းရှင်း ပြောရရင်လှည့်ကွက်တွေကို မကောင်းတဲ့ဘက်မှာအသုံးချတတ်တဲ့ လူလိမ်တွေအကြောင်း ၊ လူလိမ်တွေရဲ့လိမ်နည်းတွေကို အများကြီးသိခဲ့ရပါတယ် ။ အခုအဲ့ဒီမျက်လှည့်ရဲ့
အခြေခံသဘောတရားတွေကို နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်ကြီးတွေအနေနဲ့အသုံးချလာတာ၊နိုင်ငံရေးတိုက်ကွက်တွေအနေနဲ့ အသုံးချလော်ဘီလုပ်လာတာတွေကို တော်တော်များများတွေ့လာမိပါတယ် ။ (တစ်)
(၂) တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးပုံစံနဲ.လမ်းကြောင်းလွှဲပါတယ် ။ ရှင်းပါဦးမယ် ။ ဒေါ်စုက လူကိုမကြည့်နဲ့ ပါတီကိုပဲ ကြည့်မဲပေးပြောတော့ သူတို့ကဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာ လူကိုမရွေးချယ်ရဘူးလား ဆိုပြီး မသိနားမလည်တဲ့သူတွေကို ဒီမိုကရေစီစနစ်ရပြီးသယောင် ၊ ဒေါ်စုကပဲ အာဏာရှင်ဆန်ဆန်မဲဆွယ်သယောင် ဖန်တီးပြီး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီမရသေးဘူးဆိုတာကို ပြည်သူတွေ မေ့ပြီး ၊ ဒီမိုကရေစီပဲ ကိုယ်ရွေးချင်တာရွေးမှာပေါ့ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်တွေမှားယွင်းအောင်လုပ်ဆောင်တဲ့ တိုက်ကွက်ပါ ။ နောက် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကို မဲပေးရမယ်ဆိုတာနဲ့ လမ်းကြောင်းလွှဲပြန်ပါသေးတယ် ။
လော်ဘီက တခါမှအားမပေးဘူးတဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကို အပြင်းအထန်အားပေးလာပြီး NLDမဲမရအောင် အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်လာပြန်ပါတယ် ။ ဒါလည်းအဓိက လမ်းကြောင်းနဲ့လွဲအောင်လုပ်တဲ့ လှည့်ကွက်တစ်ခုပါ ။ သူတို့က ဒီမိုကရေစီ နဲ့ မညီလို့ထောက်ပြနေတာမဟုတ်သလို ၊ တိုင်းရင်းသားတွေအားပေးချင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး ၊ အဓိကမြှုပ်ထားတာက ၊ သူတို့ဖုံးကွယ်ထားတာက လွှတ်တော်ထဲမှာ နေရာယူထားပြီးသား ၂၅ကျပ်သားရယ် ၊ သူတို့ကြံ.ဖွံ.က နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းရအောင်လုပ်ပြီး စစ်တပ်ကျောထောက်နောက်ခံရှိတဲ့အစိုးရဖန်တီးပြီး စစ်မှန်တဲ့ အရပ်သားအစိုးရတစ်ရပ်ပေါ်လာမှာကို ဆက်လက်တားဆီးမယ့်အစီအစဉ်ပါပဲ ။ အခုဒီမိုကရေစီနည်းအရ ကိုယ်ပေးချင်တာပေးရမယ်ဆိုတဲ့ ဆရာကြီးတွေတော်တော်များများနဲ့ ၊ နောက်ပြီး ငါကတိုင်းရင်းသားမို့တိုင်းရင်းသားပဲပေးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေကို ပြောပြချင်တာက
စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီမရသေးပါဘူး ၊ နောက်တချက်က ရွေးကောက်ပွဲဟာလည်း စစ်မှန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ မဖြစ်ဖို့မသေချာသလောက် ၊ မဲခိုးမဲလိမ်ဖို့လုပ်မယ့် အရိပ်ယောင်တွေလည်းအများကြီးတွေ့နေရတယ်ဆိုတာပါပဲ ။ ဒီတော့သူများတွေလမ်းကြောင်းလျှောက်လွှဲတဲ့နောက်လိုက်ယုံစားပြီး ထင်ရာမဲပေးမိရင် လက်ရှိအစိုးရကဆက်လက်အုပ်ချုပ်မယ် ။ပြည်သူ့ ဆန္ဒမပါတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ.စည်းပုံထဲက ပြင်သင့်တာတွေလည်းမပြင်ဖြစ်နိုင်သလို ၊ ၂၅ ကျပ်သားကလည်း လွှတ်တော်ထဲအမြဲရှိမယ် ၊ နောက်နောင်များစွာလာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲတွေလည်း ဒီလိုပဲ ခများတို့ကျွန်တော်တို့ကို ဒီမိုကရေစီအရ ရွေးချင်ရာရွေးပြောမယ် ၊ ပြီးရင်မဲခိုးမဲလိမ်တာတွေဆက်လုပ်မယ် ၊ အစိတ်သားနဲ့ပေါင်း အစိုးရဖွဲ.ပြီး ဒီမိုကရေစီ နာမည်ပြ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုအစဉ်အဆက်ဆက်လုပ်ချင်တဲ့ ကလိမ်ကကျစ်ဉာဏ်တွေပါပဲ ။ လော်ဘီတွေ ချမပြရဲဘဲ နောက်ကွယ်မှာဖုံးကွယ်ထားတာလည်း ဒီအချက်တွေပါပဲ ။ NLD ပါတီအနိုင်ရလာရင် အစိုးရဖွဲ.နိုင်ခဲ့ရင်စစ်မှန်တဲ့အရပ်သားအစိုးရဖွဲ.ပြီး နောက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းမှာ ဒီမိုကရေစီနည်းကျကျစစ်စစ်မှန်မှန်ကိုယ်ကြိုက်ရာတွေကို ရွေးချယ်နိုင်တော့မှာပါ ။ အခုတစ်ကြိမ်မှာတော့ စစ်အစိုးရကိုဖယ်ရှားပြီး စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ အင်အားရှိတဲ့ပါတီဟာ NLD ကလွဲလို့မရှိပါဘူး ။ ဒီတော့ အများပြောနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းကျဆိုတာ အခုအချိန်မှာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး ၊ ဒီမိုကရေစီနည်းကိုအရင်ချပေးမယ့် လူကိုမဲပေးရမှာပါ ။ ဒီမိုကရေစီနည်းကို အရင်ခြေခြေမြစ်မြစ် ပုံစံချပြီးမှသာ ဒီမိုကရေစီ နည်းကျကျမဲပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း လမ်းကြောင်းအလွဲတွေနောက်လျှောက်လိုက်နေတဲ့ သူတွေကိုသတိပေးလိုက်ရပါတယ် ။ အခြားအမျိုးမျိုးသော ( Miss direction) လှည့်ကွက်တွေကိုလည်း ဆက်လက်ကြည့်တတ်ရင်မြင်နိုင်မှာပါ ။ ဥပမာ ၅၉(စ) ပြင်မယ်လုပ်နေချိန် ခေါင်းလောင်းဆိုပြီး နာမည်ကြီးအောင်ထလုပ်တာ ၊ ဦးနေဝင်း လက်ထက်မှာလည်း ဆန်သယ်ယူမှုတားမြစ်လို့ လူတွေငတ်ပြဿနာတွေတက်တော့ တရုတ်မြန်မာအဓိကရုဏ်းဖန်တီးတာ အစရှိတဲ့ လမ်းကြောင်းလွှဲလှည့်ကွက်တွေအများကြီးမြင်လာနိုင်မှာပါ ။ (နှစ်) နောက်မျက်လှည့်မှာ အသုံးများတဲ့ အခြေခံပြကွက်က (Point ) ထုတ်တယ် တနည်း
မစဉ်းစားနိုင်တော့ဘဲ အမြင်တွေလွဲချော်သွားစေတဲ့ နည်းပါ ။ ဒီနည်းကို ဘယ်မှာသုံးနေသလဲဆိုရင် အခုခေတ်စားနေတဲ့ ” အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတာ ” အဲဒီလို Point ထုတ်ထား၊ Highlight လုပ်ခံထားရတဲ့အရာပါ ။ အဲဒါကြောင့် ထမင်းကြမ်းနဲ့ငပိစားရရင်နေပါစေ ၊ အမျိုးဘာသာအပျောက်မခံနိုင်ဘူး ၊ စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်လည်းရတယ် အမျိုးဘာသာ အပျောက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးဖြစ်အောင် အလုပ်ခံထားရတာပါ ။ ထင်ရှားအောင် ထုတ်ပြထားတဲ့အရာလေးပဲမြင်ပြီး အခြားဆက်စပ်တွေးတောသင့်တဲ့အရာတွေ မြင်သင့်တဲ့အရာတွေအကုန်ပိတ်သွားအောင် ထုတ်ပြခြင်းခံရတာပါ ။ ဒီလိုခံရတဲ့အထဲမှာ ဆရာတော်ကြီးတွေနဲ.စာတတ်ပေတတ်ရဟန်းသံဃာတွေအများကြီးပါပါတယ် ။ ဆရာတော်တွေနဲ့ ရဟန်းတော်အများစုဟာ ဗုဒ္ဓ
ဒီတော့ အမျိုးဘာသာကာကွယ်မယ်ဆို ဥပမာပေးရရင် ပျက်ဆီးယိုယွင်းနေတဲ့ ပြိုအံ့ဆဲဆဲအိမ်တစ်အိမ်မှာ အိမ်ခေါင်းရင်းက ဘုရားစင်လေးပဲရွေးပြီး ပြန်လည်တည်ဆောက်လို့မရပါဘူး၊အိမ်ခြေအိမ်နံရံအိမ်အမိုးအကုန်ခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်နိုင်မှ ဘုရားစင်လည်း သူနေရာနဲ့သူတင့်တင့်တယ်တယ်သပ္ပါယ်နိုင်မှာပါ ၊ မဟုတ်ရင်အိမ်ပြိုရင်ဘုရားစင်တစ်ခုတည်းကွက်ကျန်မနေခဲ့ပါဘူး ၊ အကုန်လိုက်ပြိုမှာပါ ။ ဒီတော့ ထုတ်ပြထားတဲ့ အမျိုးဘာသာသာသနာလေးပဲမြင်နေတာရပ်ပြီး အခြားအရေးကြီးတဲ့
နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာတွေလုပ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုမြင်တတ်ကြပါလို့ သတိပေးချင်ပါတယ် ။ (သုံး)
ပြည်သူလူထုပါ ၊ဒီတော့သူတို.ပြောသလို့ ဒေါ်စုတို့ကမကောင်းရင် ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုမရှိတော့ဘဲအလိုလိုပျက်သုန်းသွားမှာပါ၊စစ်တပ်ကျောထောက်နောက်ခံပါတီကတော့ မရမက ကလိမ်ကကျစ်နည်းပေါင်းစုံသုံးပြီး ပြည်သူကျေနပ်နပ်မနပ်နပ် မျက်နှာပြောင်တိုက်ရပ်တည်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ ။ ဒီလိုကွာခြားတဲ့အတွက် NLD ပါတီအနိုင်ရလာရင် လက်ရှိအာဏာရအစိုးရလိုပြည်သူ့မျက်နှာမထောက်ထင်တိုင်းကြဲလိုမရပါဘူး ။ ကြဲရင် ၅နှစ်ပြီးအလိုလိုပြုတ်ကျသွားမှာပါ ။ ဒါက အရောင်တူပေမယ့် (Issue) အကြောင်း
ချင်းရာနဲ့ ပုံစံမတူတာကိုခွဲထုတ်ပြတာပါ ။ ဒီတော့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရဖြစ်လို့ ပြဿနာတက်တဲ့အခါ မဖြေရှင်းတတ်လို့ ” ကျောင်းသားလေးတွေရိုက်လို့ ပြန်ရိုက်ရပါတယ် ” ပြောတိုင်းဒေါ်စုကလိုက်ပြောမယ်လို့ပြောနေတာကတော့ တမင်ရှုပ်ထွေးအောင်လော်ဘီလုပ်ချင်းသာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြချင်ပါတယ် ။ နောက်ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ပါတီနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ ကွာခြားချက်အကြီးကြီးက ဦးသိန်းစိန်ပါတီက
ဒေါ်စုသားအကြီးသူ့ဘာသာမုတ်ဆိတ်မွှေးထားတာကိုလည်း ကုလားဖြစ်ပြီဆိုပြီးပြောတာမျိုးတွေ ၊ ဆရာတော်ဦးဝီရသူကိုယ်တိုင် ဟိန္ဒူဗုဒ္ဓဘာသာ ဒေါ်စုကားမောင်းသူကို အဲဒါ ကုလား ၊ မွတ်ဆလင် ၊ ဆိုပြီး (ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောရင်) မုသာဝါဒ ၊ (အရပ်ပြောပြောရင် ) ကလိမ်ကကျစ်ကျတာလည်း အဲဒါ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေအောင် အမြင်မှားယွင်းအောင်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေး အောက်လုံး ( illusion ) တွေဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီတော့အားလုံးကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောချင်တာက ခများတို့မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အရာတိုင်းဟာ မှန်မနေပါဘူး ။ ” ငါ့မျက်လုံးနဲ့တပ်အပ်မြင်တာတို့ ၊ ငါ့ရှေ.မှာဖြစ်သွားတာကွ ၊ အဲဒါအမှန် ” လို့ပြောတိုင်း မျက်လှည့်ပညာရှင်တွေနဲ့ မျက်လှည့်
ကတော့ ခများတို့တသက်လုံးသူများလိမ်တာခံနေရမှာပါ ။ ဒီတော့နိုင်ငံရေးအောက်လုံးမှာသုံးနေတဲ့ (illusion) သဘောတရားတွေကိုလည်း သဘောပေါက်ပြီး အကြောင်းအရာကိုသေချာ ဂဃနဏသိအောင် လုပ်ကြပါ ။ ဒီအကြောင်းအရာတွေကတော့ နိုင်ငံရေးမှာအသုံးပြုနေတဲ့ ( Tricks ) လို့ခေါ်တဲ့လှည့်ကွက်တွေပါပဲ ။ ဘယ်အရာမဆိုကောင်းတဲ့ဖက်မှာအသုံးပြုရင်ကောင်းတာဖြစ်ပြီး မကောင်းတဲ့ဖက်မှာအသုံးချရင် မကောင်းတဲ့အရာပါပဲ ။အခြားနည်းတွေကိုလည်းနောက်အလျဉ်းသင့်သလိုဖော်ပြပါ့မယ် ။ အခုလော်ဘီတွေသုံးနေတဲ့ တိုက်ခိုက်နည်းတွေဟာ အခုပြောပြထားတဲ့အချက်တွေထဲကမလွတ်ပါဘူး ၊ ဒီနည်းတွေကိုပဲအမျိုးမျိုးလှည့်ပတ်သုံးပြီး အာဏာရှင်သက်ဆိုးရှည်အောင်ကြံဆောင်နေကြတာပါ ။ ဒီတော့ ရိုးသားတဲ့ပြည်သူတွေအမြင်မှား၊အထင်မှား၊အတွေးမှားတွေမဖြစ်အောင် သိပြီးသားသူတွေကတတ်နိုင်သမျှ ဖြေရှင်းပေးကြပါ ၊ ဖော်ထုတ်ပေးကြပါ ။ အတွေးအမြင်အမှန်တွေကိုချပြပေးကြပါ ။ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ထင်ရာကိုယ်စိုင်းခဲ့ရင်ဖြင်တော့ စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘဲ အောက်ကပြထားတဲ့ပုံအတိုင်းကျွန်တော်တို့သားစဉ်မြေးဆက်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီ အမည်ခံ အာဏာရှင်စနစ် လက်အောက်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်ဒုက္ခခံရမယ်ဆိုတာလည်းသတိပေးချင်ပါတယ်ခမျာ။ဒီတော့ စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်တခုတည်ဆောက်ဖို့ NLD ပါတီကိုဝန်းရံပေးကြပါလို့ နှိုးဆော်တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ရပါတယ် ။ အလင်းရောင် ပုံ=အင်တာနက်